Fanaovan’ny Gazety Sri Lankey Ireo Vehivavy Ho Toy Ny Entana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2017 11:43 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Português, русский, Français, Español, English
Tao amin'ny Groundviews, tranonkala iray fanaovan-gazetin'olontsotra efa nahazo loka tao Sri Lanka, ity lahatsoratra avy tamin'i Deepanjalie Abeywardana ity no nivoaka voalohany. Ny dika nalefa eto ambany dia navoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty amin'ny Global Voices.
Anatin'io trangan-javatra io dia manome fanamarihana maromaro momba ny fanehoana ireo vehivavy any anatin'ireo gazety amin'ny fiteny Sinhala ity lahatsoratra ity, nifototra tamin'ny angon-drakitra avy ao amin'ny Ethics Eye — sehatra iray ao amin'ny Facebook, izay manaraka maso sy mametaka marika amin'ireo fanitsakitsahana ireo etikan'ny haino aman-jery any anatin'ireo gazety an-tsoratra fito Sinhala — ny Dinamina, ny Divaina, ny Lankadeepa, ny Mawbima, Sunday Divaina, Sunday Lankadeepa ary ny Sunday Mawbima.
Manitsakitsaka io etika taridalana io ny sasany amin'ireo gazety an-tsoratra nentim-paharazana Sinhala ao Sri Lanka, amin'ny fanehoana ireo vehivavy ho toy ny entana ilain'ny filan'ny nofo. Any anaty gazety, matetika atao toy ny entana ireo vehivavy, amin'ny fampiasàna ireo teny tsy loa-body na sary mihantsy filàna. Ireny teny tsy loa-body ireny matetika dia ireo izay mampiseho sary mitafy tapaka, izay tsy misy idirany amin'izay voalazan'ilay lahatsoratra. Ohatra, tao amin'ny iray amin'ireo lahatsorany dia notondroin'ny gazety an-tsoratra iray Sinhala ho “baduwa” (zavatra) ny vehivavy iray, amin'ny filazana ankolaka fa fitaovana ho an'ny filàn'ny nofo ireo vehivavy. Nolazain'io gazety io ihany koa fa ireo mpilalao an-tsehatra rehetra ao Sri Lanka dia tafiditra ao anatin'ilay “asa ela indrindra teto an-tany”, manao azy rehetra ho mpiasa mpivarotena.
Ankoatra izany, nisy andian-dahatsoratra maro nivoaka tamin'ny iray amin'ireo gazety an-tsoratra nentim-paharazana Sinhala nisy sarinà vehivavy avy any ivelany manao “bikinis”, izay tsy nisy nifandraisany mihitsy tamin'ilay tantara notaterin-dry zareo. Tsy nahitàna fanambaràna mihitsy tamin'ireo andian-dahatsoratra hilazàna hoe sary nalaina amin'ny fakàntsary mahatakatra lavitra ireo ary tsy nakàna ny faneken'ireo azo sary. Araka ny voalaza ao amin'ny Kaodin'ny Fomba Fiasa Matianina navoakan'ny Fiombonamben'ireo Mpanonta lahatsoratra ao Sri Lanka, dia tsy azo ekena ny fampiasàna fitaovana fakàna sary mahatakatra lavitra mba hakàna sary olona tsy nahazoana fahazoandàlana avy aminy, any anaty tanànany manokana na iraisan'ny daholobe, izay misy fiandrandràna fiainana manokana azo ekena araka ny tokony ho izy– raha tsy hoe ho tombotsoam-bahoaka.
Ampiasaina any anaty gazety ireo teny manambany toy ny “manja”, indrindra rehefa entina hilazàna ireo tratran'ny fanolanana sy ireo sisam-paty. Lazaina any anatin'ireo lahatsoratry ny gazety maro amin'ny fiteny Sinhala ny endrika ivelan'ireo vehivavy niharan'ny fanolanana sy sisam-paty tamin'izany, na avy aminà loza na tranga hafa. Mahazatra ny mahita matetika any anatin'ireo gazety amin'ny fiteny Sinhala ny fitaterana antsipirihan-javatra tsy misy ifandraisany, tsy misy ilàna azy (toy ny endrika ivelany), rehefa tsy misy ifandraisany mivantana akory amin'ilay tantara. Ohatra, fony nisy tovovavy roa mpianatra maty noho ny lozam-piarandalamby tany Dehiwela tamin'ny taona lasa, enina tamin'ireo gazety fito amin'ny fiteny Sinhala no niteny momba ny endrika ivelan'izy ireo rehefa nanao tatitra momba ilay tranga.
Manamafy ny fitsaratsaram-poana ny vehivavy ny fanaovana azy ireny ho toy ny entana any anaty gazety. Ambonin'izay, ny fanaovana azy ho toy ny fitaovana ara-nofo sy ireo fanehoana manimba azy ireo atao any anaty gazety dia mitondra mankany amin'ny fanamaivanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Vao haingana ny “The Guardian” no nahita hoe ny fanaovana ny vehivavy sy ny ankizivavy ho toy ny entana sy fitaovana ho an'ny filàn'ny nofo any anaty haino aman-jery dia mifandrohy amin'ny fomba fitondrantena mpanavakavaka ny lahy sy ny vavy ao anaty fiarahamonina ary ny fanekena ireo ideolojian'ny lehilahy manao ny vehivavy ho toy ny entana.
Ny dingana voalohany hitsaboana io olana io dia ny famoronana fanentanana momba ny fanitsakitsahana ny fitsipi-pitondrantena vitan'ireo gazety rehefa manao tatitra momba ny vehivavy. Tamin'ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy – 2017, ny Ethics Eye dia namoaka lahatsary iray nanasongadinany ny sasantsasany amin'ireo andalan'ny fitsipi-pitondrantena nohitsakitsahan'ireo gazety Sinhala momba io raharaha io. Ankoatra an'io, ny fitarihana adihevitra manodidina ny fanitsakitsahana fitsipi-pitondrantena any anatin'ireo haino aman-jery sy ny fanelezana fanentanana manodidina azy ireo dia hanome ho an'ny daholobe ireo torohay ilainy mba hitakiana valinteny amin'ireo mpanao gazety sy ireo toniandahatsoratra momba ireo hadisoana vitan'izy ireny, ary ny fahavoazana nateraky ny tatitra manafintohina navoaka. Ambonin'izany, dia ilaina maika ao Sri Lanka ny fanofanana ireo mpanao gazety momba ny fitsipi-pitondrantena — tafiditra amin'izany ny fanaovana tatitra momba ny vehivavy, amin'ny fomba tsy manavakavaka sy manao azy ho toy ny fanaitairana filàna.
Deepanjalie Abeywardana no Lohan'ireo Sampandraharaha FikarohamBaovao ao amin'ny Verité Research, ary koa mifandray amin'ny Ethics Eye, ilay mpanaramaso tsy miankina ny haino aman-jery.